PINN: safidy hafa amin'ny NOOBS ho an'ny Raspberry Pi | Avy amin'ny Linux
PINN: safidy hafa amin'ny NOOBS ho an'ny Raspberry Pi anao
Vao haingana aho no niresaka momba ny NOOBS eto amin'ny bilaogy, izay dia fitaovana ahafahantsika mametraka rafitra marobe amin'ny Raspberry pi, NOOBS dia fitaovana iray izay manome antsika mivantana ny tranokala Raspberry Pi ofisialy.
Ao aminy afaka mahita ireo rafitra tohanan'ny isika avy amin'i NOOBS izay ahitantsika ny Raspbian, ny vady Ubuntu, Windows 10 ary ny hafa. Izany no antony hiresahantsika amin'ity resaka PINN ity izay fanoloana ny NOOBS.
1 Momba ny PINN
2 Ahoana ny fametrahana PINN amin'ny Raspberry Pi?
3 Ahoana ny fanamboarana ny haben'ny fitehirizana PINN?
Momba ny PINN
PINN (Tsy NOOBS ny PINN) toa ny NOOBS dia mpiorina rafitra miasa ho an'ny Raspberry Pi izay mamela anay hametraka rafitra fiasa isan-karazany amin'ny karatra SD-nao.
Amin'ny fotoana fanombohana, ny iray amin'ireo rafitra fiasa napetraka dia azo fidina hanombohana.
PINN dia afaka miasa ho toy ny programa fanarenana ihany koa hametraka indray ny rafitra ampiasainao amin'ny "fepetra apetraka voalohany" sao hianjera izy, na te-hiverina fotsiny ianao.
Na dia amin'ny endriny aza dia mitovy ny PINN sy ny NOOBS inona no mampiavaka PINN izany ve Izy io dia manana fiasa bebe kokoa izay mahatonga azy ho ambony noho ny NOOBS.
Tsy toy ny NOOBS izay manana lisitr'ireo rafitra afaka mametraka PINN dia tsara kokoa satria ny lisitry ny rafitra fiasa hametrahana ny Raspberry PI dia lehibe kokoa.
Ahoana ny fametrahana PINN amin'ny Raspberry Pi?
Si te hanandrana an'ity safidy hafa amin'ny NOOBS ity ianao tokony hataontsika mankanesa any amin'ireto rohy manaraka ireto izay hahazoantsika kinova PINN Lite izay mitovy amin'ny NOOBS Lite.
Na dia misy kinova PINN mahazatra aza dia manana Raspbian ao anatiny ihany izy io, ka tsara kokoa ny mampiasa ny kinova Lite.
Vita ny fisintomana hofongarantsika ny rakitra vao azoazonay ary adikao ao amin'ny SD-nay daholo ny atiny.
Avy eo dia manohy mampiditra ny SD ao anaty Raspberry Pi izahay ary mampifandray azy amin'ny herinaratra ary ho hitantsika fa manomboka ny PINN.
Como ho hitanao fa ny interface dia mitovy amin'ny NOOBS, mba hahitana ny lisitry ny rafitra misy amin'ny fitaovantsika tsy maintsy mifandray amin'ny tamba-jotra isika.
izany ataontsika avy amin'ny kisary Wifi izany, mifantina ny tamba-jotra izahay hifandray.
Amin'ny alàlan'ny fananana fifandraisana Internet ho hitantsika ireo rafitra miasa isan-karazany lehibe azontsika apetraka amin'ny rafitray.
Ahoana ny fanamboarana ny haben'ny fitehirizana PINN?
PINN Izy io dia manana fatiantoka ary izany dia ny fametrahana ny installer dia mitovy ny haben'ny SD, izany hoe.
Raha mametraka rafitra fiasa roa isika dia hanome ny antsasaky ny toerana ho an'ny tsirairay, raha mametraka 3 isika dia hizara telo ny habaka ary raha mifandimby.
Na dia mety tsy maneho olana aza izany raha vao jerena, raha nametraka rafitra hampiasa ny Raspberry anao ianao ho an'ny lalao ary iray hafa natokana ho an'i Kodi ihany. Mazava ho azy fa tsy ho an'ny lalao ataonao dia mila toerana malalaka ianao, noho izany dia tsy misy dikany ny fanokanananao toerana betsaka kokoa noho ny ilain'i Kodi.
Manana izany safidy roa isika. Ny voalohany amin'izy ireo dia ny manova ny haben'ny fizarazaran-tany amin'ny fanampian'ny Gparted.
Na dia mety hiteraka fanimbana ny rafitra aza ity fomba ity, ny fomba fanaovana azy amin'ny fomba mety dia ny famindrana tsirairay ireo fizarazaran-tany. Satria raha manao ny zava-drehetra indray mandeha ianao dia ho azonao antoka fa handrava ny rafitra Raspberry Pi anao.
Ny fomba faharoa dia amin'ny fanovana rakitra PINN noho izany dia azontsika atao ny mampiasa ny rindranasa noforonin'ny mpampiasa iray ny rohy izany.
Eto isika dia hisafidy ny maodely Raspberry Pi, ny haben'ny SD-nay ary hampiseho ireo rafitra hapetrakay eo amboniny.
Vantany vao voafantina, dia hamela antsika hanondro izay habe homentsika azy tsirairay.
Amin'ny faran'ity, hanome antsika rohy handefasana ny rakitra hapetratsika ao anaty PINN izahay ary vonona hiaraka aminy hametraka ireo rafitra voalaza ao amin'ny Raspberry Pi anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » PINN: safidy hafa amin'ny NOOBS ho an'ny Raspberry Pi anao
Luis Turner dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, ny hany fisalasalana ananako dia, rehefa manova ny haben'ny karatra sd
apetraho libreelec sy batocera raha mila mamela gigs ampy ianao hanampiana ireo efitrano ao amin'ny fampirimana fizarana.
ny lahatahiry efitrano izay ananako 24 GB
Manantena aho fa hisy valiny tsy ho ela ary esory io fisalasalana io.
Valio i luis tornero
Natron: fampiharana fanoratana nomerika mitovy amin'ny After Effects
Runescape sy Tibia: Mametraha sy milalao amin'ireo mpanjifa teratany ao amin'ny GNU / Linux